USELE dengwane umndeni wakwaDladla eMbali Unit 2 emva kokuba kuqhume ipayipi lamanzi elihamba ngaphansi kwendlu ngoLwesithathu olwedlule.
“Sivuswe ukuqhuma obekwenzeka egumbini lokuphumula ekuseni ngezikhathi zokugamanxa kwehora lesikhombisa. Sonke sivukile sahlangabezwa amanzi ebephuma phansi eqhumise ama tiles. Siphuthumile sazama ukuvula iminyango ngoba omunye wawo ubusunenkinga ungavuleki. Size saphoqeleka ukuthi siwugqekeze umnyango ukuze uvuleke,” esho uDladla.
Okhulumela umasipala UMsunduzi uNksz Nqobile Madonda uthe abezinhlekelele kanye noMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu nabo bebeyingxenye yokuyobheka isimo senhlekelele yomuzi wakwa Dladla.
“UMnyango obhekelela ezamanzi nawo uzobheka isimo isimo salo mndeni,”